खुट्टा दुख्छ ? बाथ पो हो कि ! – Health Post Nepal
खुट्टा दुख्छ ? बाथ पो हो कि !
२०७५ भदौ ३ गते १२:३६
खुट्टाको सामान्य दुखाइमा पनि बाथ भयो कि भनेर आशंका गर्नेको भन्दा ठूलो संख्या बाथले गम्भीर रूप लिइसक्दा पनि केही दिन हेरौँ भन्दै खपेर बस्नेहरूको छ । धेरैलाई हातखुट्टाको दुखाइ बाथ हो कि होइन भन्ने छुट्याउन कठिन पर्छ । वेलैमा बाथ भए–नभएको यकिन गर्नुपर्छ । यसमा प्रवेश गर्नुपूर्व बाथबारे केही जानकारी लिनैपर्छ । बाथरोग एकप्रकारको अटोइम्युन डिजिज हो । हाम्रो शरीरको रोगनिरोधक शक्तिले जब आफ्नै शरीरका अंगमा असर गर्न थाल्छ त्यसवेला अटोइम्युन डिजिज सुरु हुन्छ । जसको फलस्वरूप मुख्यतः शरीरका जोर्नीहरू दुख्ने वा सुन्निनेजस्ता लक्षण देखिन थाल्छन् र क्रमशः अन्य अंगहरूमा पनि असर गर्दछ ।
बाथरोग सयभन्दा बढी प्रकारका हुन्छन् । बाथरोगको लक्षण बाथले असर गरेको अंगअनुसार फरक हुन्छ । लक्षण र कुन प्रकारको एन्टिबडी रगतमा देखिन्छ, त्यसका आधारमा यो रोगको वर्गीकरण गरिन्छ । तसर्थ, यो रोगको नियन्त्रणका लागि लक्षण एवम् एन्टिबडीको संलग्नताका आधारमा रोगको वर्गीकरण र मूल्यांकन गरी उपचार विधि अपनाउनु जरुरी हुन्छ ।
नेपालमा देखिएका प्रमुख बाथरोग
१. र्युमाटाइड आरथ्राइटिस
यो वयष्क तथा बढ्दो उमेरमा देखिने र लामो समयसम्म रहिरहने कडा बाथ हो । यो पुरुषको तुलनामा महिलामा धेरै देखिन्छ । रोगको सुरु अवस्थामा हातगोडाका जोर्नीहरू (विशेषगरी हातगोडाका औँलाहरू, नाडी, कुहिना, कुम, घुँडा र गोलिगाँठा) दुख्ने, सुन्निने र अररो हुने हुन्छ । बिहान बढ्छ भने दिउँसो घाममा सजिलो हुन्छ । रोग छिप्पिँदै गएपछि भने हातगोडाका जोर्नीहरू जाम हुने, बांगिने, बिग्रिने र काम नलाग्ने हुन्छन् । समयमा उचित औषधोपचार नभएमा यसले भित्री अंगहरूमा असर गरी बिरामीको आयु घटाउन पनि सक्छ ।
२. ढाडको बाथ (स्पोन्डिलो आरथ्राइटिस)
ढाडको बाथ ढाडका जोर्नीहरू सुन्निएर हुने एक दीर्घ रोग हो र यसले फिलाभित्रको जोर्नी, ढाड, गर्दन र कहिलेकाहीँ नितम्ब, कुम र हातगोडाका ठूला जोर्नी दुख्ने, सुन्निने गराउँछ । यो बाथ प्रायः ४० वर्षको उमेरअघि नै सुरु हुन्छ र यसले बढी मात्रामा पुरुषलाई असर गर्छ । ढाड, फिला दुख्ने, बिहानपख अररो हुनेलगायत यसले एकतिहाइ बिरामीमा आँखामा असर गरी युमिटाइटिस (आँखा दुख्ने, रातो हुने, घाममा हेर्न गाह्रो हुने) गराउन सक्छ । धेरैजसो बिरामीमा यो बाथ गराउनमा एचएलए बी ट्वेन्टिसेभेन नामक वंशाणुको भूमिका हुन्छ । यही कारणले गर्दा सन्तानमा पनि यो रोग जान सक्छ ।
यो विशेषगरी जवान र महिलामा सुरु भई लामो समयसम्म रहने एक दीर्घ बाथरोग हो । यसमा अनुहार र शरीरका अन्य भागको छालामा दाग आउने, मुखमा घाउ आउने, जोर्नी तथा मांसपेशीहरू दुख्ने, सुन्निने र अररो हुने, कपाल झर्ने, ज्वरो आउने, रोग कडा भएको खण्डमा मिर्गाैला, मुटु, फोक्सो, रगत तथा स्नायुजस्ता महत्वपूर्ण अंगमा असर पारी ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले रोगको निदान र औषधोपचार सम्भव भएसम्म अनुभवी चिकित्सकको निगरानीमा रहनुपर्छ ।
४. स्क्लेरोडर्मा (छाला बाक्लो हुने बाथ)
बढ्दो उमेरमा देखिने यो बाथ महिलामा बढी भएको पाइन्छ । यसमा हातगोडा र अनुहारको छाला बाक्लो हुने, दुख्ने, सुन्निनेलगायत चिसो पानी छुँदा हातगोडाका औँला क्रमशः सेतो, निलो र रातो हुने गर्दछ । स्क्लेरोडर्माले छालामा मात्र नभई रगतका नसाहरू, फोक्सो, मिर्गौलामा पनि असर गरी औँलामा घाउ आउने, छाती पोल्ने, दम बढ्ने र मिर्गाैला फेलसमेत गराउन सक्छ । चिसोले रोग बढ्न सक्ने भएकाले यो रोगका बिरामीले बाक्लो पन्जा, मोजा लगाउनु आवश्यक छ ।
५. ओस्टियो आरथ्राइटिस (जोर्नी खिइने बाथ)
बढ्दो उमेरसँगै देखापर्ने यो बाथ प्रायः मोटा मानिसमा देखिन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा जोर्नीमा रहेको कुरकुरे हड्डी खिइएर नष्ट हुँदै जाँदा ओस्टियो आरथ्राइटिस हुन्छ । यस किसिमको बाथले मुख्यतः घुँडा, गर्दन तथा कम्मरको मेरुदण्ड, हात तथा गोडाका बूढीऔँलाका फेद, हातका औँला तथा नितम्बको जोर्नीमा असर पार्दछ । हिँडडुल वा चलमल गर्दा घुँडा, औँला, नितम्ब, गर्दन र ढाड दुख्नु यस बाथको प्रमुख लक्षण हो । उमेर, मोटोपन तथा क्याल्सियम, भिटामिन डी, थाइराइड आदिको कमीले पनि हड्डी खिइने बाथ गराउँछ ।
६. गाउट (युरिक एसिडको बाथ)
युरिक एसिड हाम्रो शरीरमा उत्पन्न हुने एक विकारयुक्त पदार्थ हो । रगतमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्दै जाँदा यो गोडाको बूढीऔँलावरपर र (पछि अन्य भागमा पनि) जोर्नीमा जम्न जान्छ र एक्कासि दुख्ने, सुन्निने, रातो हुँदै जाने हुन्छ, जसलाई हामी युरिक एसिडको बाथ भन्छौँ । युरिक एसिड बढ्दैमा सबैलाई यो बाथ हुँदैन । यो रोग छिप्पिँदै जाँदा जोर्नी बिग्रने, बांगिने, युरिक एसिडका डल्लाहरू ठाउँठाउँमा जम्ने र मिर्गौला बिग्रने तथा मिर्गौलामा पत्थरीसमेत हुन सक्छ ।
७. केटाकेटीमा हुने बाथ (जुभेनाइल आरथ्राइटिस)
केटाकेटीमा हुने बाथ मुख्य दुई किसिमका हुन्छन् । बाथज्वरो (र्युमटिक फिभर) र जुभेनाइल आरथ्राइटिस । चिसो ठाउँमा बस्ने केटाकेटीमा घाँटीको संक्रमणबाट बाथज्वरो उत्पन्न हुन्छ । जुभेनाइल आरथ्राइटिसमा बालबालिकाको हातगोडाका जोर्नीहरू दुख्ने, सुन्निने, हिँडडुल गर्न नसक्ने, ज्वरो आउने, छालामा विभिन्नखाले दाग आउने र आँखामा असर हुन सक्दछ । समयमै पहिचान गरी उचित औषधि प्रयोग भएमा रोग बढ्न पाउँदैन र हातगोडाका जोर्नीहरू बिग्रन, बांगिन पाउँदैनन् ।
बाथरोगबाट बच्ने उपाय
मेडिकल साइन्सले बाथरोग लाग्नै नदिने उपाय अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन । यससँग सम्बन्धित भ्याक्सिन र औषधि प्नि छैनन् । परिवारका कुनै सदस्यलाई बाथरोग भएमा अन्य सदस्य सतर्क हुनुपर्छ । बाथरोग भएको पत्ता लागेमा सेकेन्डरी प्रिभेन्सन अपनाई जटिलतालाई रोक्नतिर लाग्नुपर्छ ।
धेरैजसो बाथरोगमा खानपान बार्नु आवश्यक हुँदैन । तर, युरिक एसिड बाथमा भने मुख बार्नु आवश्यक हुन्छ । युरिक एसिड बाथमा खुट्टाको बूढीऔँला रातो भएर दुख्ने र सुन्निने हुन्छ । प्रोटिनयुक्त खाना, जस्तै: सुकेको गेडागुडी, गोलभेँडा, काउली, बन्दा, च्याउ, कोक, फ्यान्टा, काजु, पेस्ता, खसी, राँगा, बँदेलको मासु, जाँडरक्सीको प्रयोगले युरिक एसिड बाथलाई बढाइदिन्छ । युरिक एसिड बाथ १ प्रतिशतलाई मात्र हुन्छ ।
बाथको जटिलताका आधारमा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बाथका कारण हड्डी खिइन थालेपछि भुइँमा टुक्रुक्क नबस्ने, पलेँटी मारेर नबस्ने, उकालोओरालो धेरै नहिँड्ने गर्नुपर्छ । जोर्नीलाई धेरै भार पर्ने काम गर्नुहुँदैन र जोर्नीलाई मोड्न पनि हुँदैन । चिसोमा धेरै काम नगर्ने, मनतातो पानी प्रयोग गर्ने, चुरोटको धुवाँमा नबस्ने गर्नुपर्छ । १० बजेअघिको घाम ताप्दा फाइदा हुन्छ । बिहानको कलिलो घाममा भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ । नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाका देशमा बस्ने मानिसमा भिटामिन डीको कमी धेरै पाइएको छ । भिटामिन डीले बाथसँग मात्र नभई शरीर दुख्ने, क्यान्सर, मुटुरोगसँग पनि सम्बन्ध राख्छ । भिटामिन डीको कमी हुनेहरूमा सामान्य बाथरोग भएमा पनि यो रोग चाँडै कडा बन्दै जान्छ । भिटामिन डीको प्राकृतिक स्रोत घाम नै हो ।